राप्रपाहरूको एकता: अल्टिमेटम के का लागि ? - Ujyaalo Nepal
राप्रपाहरूको एकता: अल्टिमेटम के का लागि ?
By ujyaalo	 On Jan 18, 2020 329
राप्रपाहरूको एकताको अल्टिमेटम, सत्ता र कुर्सीको उपासना हो कि मुद्दा र एजेण्डाको अर्चना <
कहिले सिद्धान्तको सर्त त कहिले समयसीमाको सर्त । यस्तै समाचारहरू पढ्न पाइएको छ तर ती सर्त पछाडिको निष्ठा, पात्र, चरित्र कति विश्वसनीय, कति दिगो भन्ने संश्लेषण, मन्थन भएको सुनिएन
कथनी र करणीको अनमेलले राप्रपाका लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य भंगालो पार्ने काम भयो, कसै दुर्जनको कुण्ठा र उपासनाले पार्टीलाई क्षतविक्षत बनायो ।
हो, त्यसैले आत्मघात परास्त गरी आत्मबलका लागि समेत राप्रपा बीचको एकता अपरिहार्य छ तर तिनको अन्तस्करणको शुद्धिका लागि प्रायश्चित स्वरूप तिनले गर्नु पर्ने त्याग पनि समयले मागेको छ । एकातर्फ पार्टीभित्र यस्तै सुझाव, माग र जनमत सतहमै आइसकेको छ । स्वार्थका असुरले शुद्धिका लागि प्रायश्चित गरे, बुद्धि फर्के बेश, नत्र एकताको महाधिवेशनले अगाडिको बाटो, नीति र नेतृत्व तय गर्छ नै ।
किनकि अबको एकता भनेको सत्ता र कुर्सीको उपासना होइन मुद्दा र एजेण्डाको अर्चना बन्नु पर्दछ । सिंहदरबारको आसक्तिमा होइन अनासक्तिको जगमा टेकेर गरिनु पर्दछ । स्वार्थको असुर बनाउनका लागि होइन निस्वार्थ पहिचानका लागि सुर बनाउने प्रवृत्तिको हुनु पर्दछ । पार्टी फेरि पनि फुटाउने आत्मघातका लागि होइन अब कहिल्यै नफुट्ने आत्मबलका लागि रसायनको आविष्कार बन्नु पर्दछ ।
त्यो एकता फेरि पनि अहंकारवादको भय सामना गर्नका लागि होइन निर्भय र निर्भिकताका साथ सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । त्यो एकता मौका पर्दा सिंहदरबार बाहेक कतै नहेर्ने — अर्थात फेरि पनि पतनका लागि होइन भन्ने मान्यताको स्थापनार्थ, उत्थानका लागि चट्टानी आधार बन्नु पर्दछ ।
अनि त्यो एकता भनेको पार्टी बलियो हुँदा सिंगौरी हान्दै फुटाउनै पर्ने विगतको पुनरावृति दोहोर्याएर कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य अस्त गराउने चरित्रमा होइन मुद्दा र एजेण्डाको उदय हुने भरोसाको हुनु पर्दछ ।
जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने दन्त्य कथा एकादेशका सुगाहरूले खुब रटे । मायाजालमा लट्टीएका नतमस्तकहरू हाल पनि अवशेषहरू ओकल्न खोज्दै छन्, जबकि मायावीको सच्चा आवरण लोक समक्ष उहिले उदांगो भएकै हो ।
उत्कृष्टहरू किन राष्ट्रपतिको समर्थक प्रस्तावक बने, राजतन्त्रको नीति अलाप्ने तथाकथित नेतृत्व किन गणतान्त्रिक संविधानको भरपर्दो सहयात्री बने < राजासहित प्रजातन्त्रको नीति किन सुली चढ्न पर्यो प्रश्नहरू अनुत्तरित छ । माफीको गोही आँसु झार्नेले प्रष्टीकरण दिएको, दिन सकेको छ्रैन । भ्रम चिर्न सकिएन भन्ने लाचारीको काम छैन ।
त्यसकारण अबको राप्रपाहरूको एकतामा निश्चित रूपमा सर्त खडा गरिनु पर्दछ, तर सर्त भनेको सत्ता र कुर्सीको उपासना हैन, मुद्दा र एजेण्डा प्रतिको धर्म बन्नु अपरिहार्य छ । हिजो भष्मासुर बनेर पार्टी र एजेण्डालाई शून्यतामा जाक्नेले स्पष्ट किटानी प्रष्टीकरणसहित आम माफी माग्नु पर्दछ ।
यही नै एकताको सर्त हुनु जरूरी छ । काठमाडौं नै आइपुग्दा पनि उसको निरन्तर प्रयासका बाबजुद अरू सबैलाई भेट्ने नरेन्द्र मोदीले स्वार्थका असुरलाई किन भेटेनन् भन्ने प्रश्न समयक्रमले प्रमाणित गरीसकेको छ । अर्थात् खतरा, धोका, आत्मसमर्पणवाद जे भने पनि भित्रबाटै छ ।
पार्टीको आदर्शवाद (Idealism) लाई माथिका सर्तसहित यथार्थवाद (Realism) मा रूपान्तरण गर्ने हो भने सबैको हृदयमा पवित्र मनले बास लिनु पर्दछ । अनि मात्र गुमेको ब्यक्तित्व र टुटेको भरोसा फर्काउन सकिन्छ ।
होइन भने सिंहदरबारको विशाल महल देख्न नपाउदा एकताका नाममा पार्टीको बागडोर कब्जा गरी चावहिलको बंगला भएपनि चिरिप्प पार्ने सपना भित्रबाट त्यो अल्टिमेटम आएको हो भने स्वार्थको असुरको पृष्ठपोषण बाहेक अरू केही हुने छैन — जो जनता, कार्यकर्ता, समय र एकीकृत पार्टीको माग र आवश्यकता होइन ।
लेखक राप्रपा (संयुक्त) का केन्द्रीय सदस्य हुन्